အာဏာပိုင်တွေ တောထဲစွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့ မိန်းကလေးရဲ့အမေ ဒဏ်ငွေချခံရ ပြည်မြို့မှာ အခြေအနေမဲ့ ကလေးတွေကို ဒေသခံ အာဏာပိုင်တွေက တောထဲသွား စွန့်ပစ်တဲ့ကိစ္စ မီဒီယာတွေကို ပြောလိုက်တဲ့ ဇင်မာလှိုင်ဆိုသူ မိန်းကလေးရဲ့အမေ ဒေါ်တင်တင်ထွေးနဲ့ အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦးကို ပြည်ဘူတာရုံမှာ ရဲက မနေ့ ညက
ဖမ်းလိုက်တဲ့ အမှုအတွက် ပြည်မြို့နယ် တရားရုံးက ဒီနေ့ နေ့လည်မှာ အပြစ်ရှိကြောင်း အမိန့်ချပြီး ဒဏ်ငွေ ၅၀၀ ကျပ်စီ အသီးသီးချမှတ် လိုက်ပါတယ်။
ဒီအမှုမှာ သူတို့ မကျူးလွန်တဲ့အတွက် ဝန်မခံနိုင်ဘူးလို့ ဒေါ်တင်တင်ထွေးတို့က ခုခံတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆက်လက် တရားရင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင် အကြိမ်ကြိမ် တရားရုံး လာရမယ့်ကိစ္စနဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ကုန်ကျစရိတ် အခက်အခဲ၊ အချိန်အခက်အခဲတွေကြောင့် ပြစ်မှု မကျူးလွန်ပေမယ့် အခုလို ဒဏ်ငွေရိုက်တာကို လက်ခံဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတယ်လို့ သူတို့အမှုကို ကူညီပေးနေတဲ့ ဂရုဏာလက်များ ကွန်ယက်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ရှေ့နေ ဦးမြင့်အေးက RFA ကိုပြောပါတယ်။
အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ် ဇင်မာလှိုင်ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးက သူတို့စွန့်ပစ် ခံရတဲ့အကြောင်း သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြောလိုက်တဲ့နောက် ဘူတာရုံမှာ စကားထိုင်ပြောနေတဲ့ သူ့မိခင်နဲ့ ဈေးသည် အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးကို မနေ့ညက ရဲပုဒ်မ ၄၇ ဆိုတဲ့ မူးယစ်ရမ်းကားမှုနဲ့ ဖမ်းလိုက်တဲ့အကြောင်း RFA က တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဒီကိစ္စမှာ အဲဒီကလေးတွေကို ပညာသင်ပေးနေတဲ့ ရှေ့နေ ဦးမြင့်အေးတို့က လိုက်ပါဆောင်ရွက် ပေးခဲ့တဲ့အတွက် မနေ့ည သန်းခေါင်ကျော် ၁ နာရီလောက်မှာ အာမခံနဲ့ လွှတ်ပေးလိုက်ပြီး ဒီနေ့ ရုံးတင် တရားစွဲ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ် လိုက်တာပါ။
တရားရုံးကို ပေးဆောင်ရမယ့် ဒီဒဏ်ငွေကိ်ု ဒေါ်တင်တင်ထွေးတို့ ကိုယ်စား ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ စည်းရုံးရေးမှူး တစ်ဦးက ပေးလိုက်တယ်လို့ ဦးမြင့်အေးက ပြောပါတယ်။
ဂရုဏာလက်များ ကွန်ယက်အဖွဲ့ဟာ ပြည်မြို့က မိဘမဲ့နဲ့ အခြေအနေမဲ့ ကလေး ၃၀ ကျော်ကို မြကွမ်းတောင် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ပညာသင်ပေးနေသလို နေ့လည်စာလည်း စီစဉ်ပေးနေပါတယ်။
I'm interesting who and how will take the action whom the make crime.
Aug 10, 2012 02:01 AM
I think, Government should give people to more knowledge about future generation, because they are our future is generation who will take our country is duty in future and also parents must take responsible for their children who under age. If we want our country to be developenment, we need learn from the developed countries is system for children and other as well. What Our buddha said, if the thing is good, we need to learn, no matter they are other religion, we need to learn from their good manners. It doesn't mean that we are duplicate from other religion. It's mean that we are following the good community. It's all the Myanmar citizen responsible for the future of Myanmar.
Aug 10, 2012 01:18 AM